Abavelisi bebhotile ye-PE kunye nababoneleli - i-china PE yebhotile yefektri
Imidlalo yangaphandle ephathekayo Ibhotile yamanzi
Le yibhotile yamanzi yezemidlalo engaphandle kokusingqongileyo enobuhlobo, eneringi ephathekayo emlonyeni webhotile, ekulula ukuyiphatha.
Ukomelela kwe-Eco ekumgangatho ophezulu ngebhotile yamanzi
Iibhotile zamanzi zemidlalo zangaphandle ze-1000ml ezinkulu, ezenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu ezinobungqongileyo, zilungele uthotho lwemiboniso enjengokomelela, ukunyuka intaba, iipikniki, njl.
Imidlalo yangaphandle yaManzi aBetha iPlastiki
Ibhotile yezemidlalo enkulu eyi-2500ml. Ngomqheba ophathwayo, onobunzima kunye nohlala ixesha elide. Uyilo lwe-inshorensi, kulula ukuyivula. Ikuvumela ukuba usebenze ngesandla esinye ngexesha lokuzilolonga. Ingaphakathi lixhotyiswe ngesihluzo sebanga lokutya, kwaye izinto zasimahla ze-BPA zasimahla zikuvumela ukuba ukhusele indalo ngelixa usondele kwindalo.
Sula ibhotile yaManzi i-BPA Simahla
Nokuba bubomi bemihla ngemihla, ukuhamba ezidolophini, ukhenketho lweholide okanye imidlalo yangaphandle. Nonke nineemfuno zemihla ngemihla zokuhambisa amanzi, ngenxa yoko isixhobo esifanelekileyo sokusela sibaluleke ngokukodwa. Umthamo ophakathi we-1500ml, isibambo esiphathwayo, ukuvulwa okukhulu kokugcwaliswa ngokulula nokucoca. Ibhotile yamanzi enjalo ngaphandle kwamathandabuzo lolona khetho lufanelekileyo.
Ibhotile yamanzi ePlastiki
Umzimba wekomityi ococekileyo kunye nobhityileyo, umthamo olinganiselweyo we-1500 ml, umlomo wamanzi wokutsala onokuthi uthathwe uselwe, kunye nesiphatho sesilicone esiqhagamshelwe kwikepusi yebhotile. Zonke iinkcukacha zoyilo ziya kubonelela ngokulula kwimithambo yakho. Nokuba iyasebenza, ibhayisekile, ukunyuka, okanye ukuhamba. Ungayisebenzisa ngesandla esinye kwaye uphinde uzalise amanzi nangaliphi na ixesha.